Ikhaya | GLAMOR
Professional LED ukukhanyisa nomkhiqizi kusukela ngo-2003
UKhisimusi Motif Light
I-Crystal Jade Led Strip Light
Waholelwa Ukukhanya Kazamcolo
Ubukhazikhazi bunochungechunge olukhulu lomkhiqizo, amalambu okuhlobisa e-LED, amalambu we-SMD strip kanye nemikhiqizo yokukhanyisa.
Izibani zokuhlobisa ze-Glamour LED zibonwa njengemikhiqizo esezingeni eliphezulu embonini yokukhanyisa yokuhlobisa.
Izigaba zomkhiqizo zifaka phakathi amalambu entambo aholelekile, amalambu ezintambo aholelekile, amalambu we-motif, amalambu okuhlobisa kanye nemikhiqizo yokuhlobisa elawulwa ngokuhlakanipha.
Imikhiqizo ye-Glamour SMD ifaka amalambu we-Dimetric led strip, amalambu we-Ultra Soft aholele imichilo, amalambu we-Crystal Jade aholele imicu kanye neon flex eholelekile. Ubumnene kanye nerediyamu encane kakhulu yokugoba yizici ezihlukile zemikhiqizo yeGlamour SMD.
Imikhiqizo ye-Glamour Illumination ifaka amalambu wepaneli ahlanganisiwe e-aluminium-plastic njengomkhiqizo wokukhanya kwangaphakathi, amalambu emigwaqo, amalambu ezikhukhula njengemikhiqizo yokukhanyisa ngaphandle, namalambu emigwaqo elanga, amalambu ezikhukhula njengemikhiqizo emisha yamandla.
Isibani somhlobiso we-LED
Izibani zokuhlobisa ze-Glamour ze-LED bezikulo mkhakha iminyaka engu-18. Imikhakha yethu yomkhiqizo ifaka isibani se-LED ngentambo, isibani sezintambo ze-LED, ukukhanya kwe-LED neon flex, isibani se-LED, amalambu e-LED, ukukhanya kwe-motif ye-LED njll. Imikhiqizo ephambili ithole i-CE, GS, CB, UL, cUL, ETL, CETL,
Isibani se-LED Strip
I-Glamour LED Strip Light ihlala igxile ekuthuthukisweni kwekhwalithi nokuqinisekiswa. Ukusebenza okuhle kakhulu kunqobile udumo oluningi nemiyalo yomhlaba wonke. Sikholelwa ukuthi "ukukhanya kwekhwalithi" kuphela okungavikela "impilo yekhwalithi".
Imikhiqizo yamandla entsha sigxile kakhulu kukho konke ochungechungeni olulodwa lomgwaqo we-SL01, ohlakaniphile nokonga amandla.
Umkhiqizo Wokukhanya Kwendlu
Glamour Illumination ingaphakathi elincane umkhiqizo okhanyayo ihlanganiswe ukukhanya kwepaneli ye-LED ngokukhanya okuseceleni nokukhanya kwangemuva; Ukukhanya okucishe sibe nochungechunge lwe-SPL, i-NPL ne-NSF, ukukhanya emuva sinochungechunge lwe-ADL, uchungechunge lwe-DLC, uchungechunge lwe-EDL nochungechunge lwe-RDL; Ngaphezu kwalokho, kochungechunge lwe-ADL basikiwe ukwakheka okuhlelekile; SPL, DLC & Uchungechunge lwe-EDL luyi-2 kumklamo ongu-1, shintsha kalula okufakwe kumphezulu obekwe phezulu.
Ithimba Lobuchwepheshe Nemishini
Bangaphezu kuka-30 onjiniyela nabaklami abaphezulu abasebenza eGlamour manje. Ukuhlomisa ngemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme, sithuthukise futhi sakha uchungechunge lwemikhiqizo ehamba phambili embonini egcwalisa izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ahlukile avela ezifundeni ezahlukahlukene nasemazweni, futhi athola amalungelo obunikazi angaba ngu-80 kuze kube manje.
Ubukhazikhazi futhi bunochungechunge lwemigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo ngokuphelele, njengemishini yokuzishisela ezenzekelayo, imishini yokugcwalisa iglu, imishini yokuhlanganisa, imishini ye-SMT, imishini ye-extrusion, imishini yokusika, imishini yokuhlola ukuguga namasethi emishini yokuhlola engaphezu kuka-300 engaqinisekisa ukuthi siqinile amandla wokukhiqiza ukuphatha ama-oda amaningi kalula kusuka kumikhiqizo edumile emhlabeni wonke.
Isungulwe ngo-2003, uGlamour uzibophezele ocwaningweni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni amalambu okuhlobisa e-LED, amalambu okuhlala, amalambu angaphandle ezakhiwo namalambu emigwaqo selokhu yasungulwa.
Kutholakala eZhongshan City, eSifundazweni saseGuangdong, eChina, iGlamour inepaki yokukhiqiza yezimboni yesimanje engamamitha-skwele angama-40,000, enabasebenzi abangaphezu kwenkulungwane kanye nomthamo wenyanga wokukhiqiza weziqukathi ezingama-90 40FT.
Ngolwazi oluseduze kweminyaka engama-20 emkhakheni we-LED, imizamo yokubekezela yabantu be-Glamour& Ukuxhaswa kwamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, i-Glamour isiphenduke umholi wemboni yokukhanyisa ye-LED. Ubukhazikhazi sebuqedile iketango lezimboni ze-LED, baqoqa izinsiza ezahlukahlukene ezizi-preponderant ezifana ne-chip ye-LED, i-encapsulation ye-LED, ukukhiqizwa kwezibane ze-LED, ukukhiqizwa kwemishini ye-LED
Ucwaningo lobuchwepheshe be-LED.
Yonke imikhiqizo ye-Glamour yi-GS, CE, CB, UL, cUL, ETL, CETL, SAA, RoHS, REACH evunyelwe. Okwamanje, i-Glamour ithole amalungelo obunikazi angaphezu kwama-30 kuze kube manje. I-Glamour ayisiyena nje umphakeli ofanelekayo kahulumeni wase China, kepha futhi ungumhlinzeki othembeke kakhulu wezinkampani eziningi ezaziwayo zomhlaba ezivela e-Europe, Japan, Australia, North America, Middle East njll.
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yakho yocingo kwifomu lokuxhumana ukuze sikwazi ukukuthumelela isilinganiso samahhala sezinhlobonhlobo zethu zemiklamo!